Malaa'igta Midigta & Bidixda ma caawiyaan Maalinta Qiyaame? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Suuradda al-Xaqa (Surah 69-Xaqiiqda) waxay sharraxaysaa sida Maalinta Qiyaame u dhici doonto iyadoo la afuufayo Buunka.
Marka Suurka la afuufo hal mar.Dhulka iyo Buurahana la xambaaro oo la burburiyo hal marMaalintaasay Qiyaamadu dhacaysaa.Samaduna Maalintaas way dillaaci wayna tabar yaraan.Malaa’igtuna Cirka gaararkiisa yey ahaan Maalintaas, Carshiga Eebana waxaa dadka korkiisa ku xambaari Maalintaas Siddeed Malag.Maalintaasaa dadka loo soo bandhigi Eebe wax xagooda kaga qarsoonna ma jiro.
Suuradda al-Xaqa 69: 13-18
Suuradda Qaf (Surah 50) waxay kale oo sharraxaysaa maalin la afuufo Buunka. Ilaah oo malaa’igta ilaalisa ee dhinaca midigta iyo bidixda ay ka muujiyaan diiwaanka camalkayaga iyo mudnaantayada. Aayadahani Akhri:
Dhab ahaan yaan u abuurray Insaanka (dadka) waana ognahay waxay naftiisu ku waswaasin Annagaana ugsa dhaw xididka dhuunta.Markay kulmi malaa’igta ilaalinaysa oo Midigta iyo bidixda ka fadhidaWax kastoo lugu hadlo waxaa la jooga Raqiib iyo Catiid (oo qori).Waxaa u yimid sakaraadkii geerida si dhab ah wanataas geeridaad ka cararaysay.Suurkii (Qiyaamana) waa la afuufi waana Maalin laysu yaboohay (oo sugan).Naf walba way iman iyadoo malag hoggaamin midna ku marag furi.Waxaana loo odhan waad halmaansanaydeen arintan (Qiyaamada) waxaana kaafaydnay daboolkii araggaaguna Maanta waa xoog badan yahay.Malaggi la xidhiidhayna wuxuu dhihi waa kan waana darbanyahay, (kiilayxilsaaray).
Suuradda Qaf 50: 16-23
Aayadda 20 waxay sheegaysaa in digniinta buunka hore loo bixiyay (ka hor intaan Qur’aanka la soo dejin). Goorma ayaa tan la bixiyay? Waxaa bixiyay Ciise Masiix) markii uu Injil ku sii sheegay in ku noqoshada dhulka lagu dhawaaqi doono buunka samada:
Maxaa dhacaya intaas ka dib? Suuradda Qaaf waxay ku tilmaamaysaa malaa’ig dhinaca midigta iyo bidixdayada ah, oo duubaysa camalkeenna. Maadaama uu Ilaah nooga dhow yahay xididkayaga halbowlaha, Injilku wuxuu inoo sheegayaa in diiwaanadan waxqabadkeenu aad u ballaaran yihiin oo dhab ahaantii ay yihiin ‘buugaag’. Tan waxaa lagu sharraxay aragti uu Yooxanaa, oo xer u ahaa Ciise , helay oo ku qoray buugga ugu dambeeya ee Injiilka. Sida ku qoran:
Muujintii 20: 11-15
Tani waxay caddaynaysaa in dhammaantood lagu xukumi doono ‘hadba waxay sameeyeen’ sida ku qoran ‘buugaagta’. Sidaa darteed waxaan salaamaynaa malaa’igta midigta iyo bidixda salaadda ka dib, annagoo rajaynayna inaan xoogaa faa’iido ah ka helno duubista camallada.
Laakiin u fiirso waxaa jira buug kale, oo la yiraahdo ‘Buugga Nolosha’, kaas oo ka duwan buugaagta-diiwaangelinta mudnaanta-wanaagsan. Waxay sheegaysaa in ‘qof kasta’ oo aan magaciisa lagu qorin kitaabka Nolosha lagu tuuri doono harada dabka (eray kale oo naarta). Markaa, xitaa haddii liiskeenna wanaagga wanaagsan ee malaa’igtu ka duubtay dhinaca midigta ay aad u dheer tahay, iyo liiska dembiyada uu malaggu duubay dhinaca bidix waa mid aad u gaaban – xitaa markaa – haddii magacayagu uusan ku jirin ‘Kitaabka Nolosha ‘waxaan lagu xukumay Jahannamo. Waa maxay ‘buugga nolosha’ sideese magaceenna loogu qoray buuggan?
Tawreedka iyo Quraanka labaduba waxay caddeeyeen in markii Aadam dembi galay uu Eebbe ka saaray Jannada oo uu ka dhigay geeri. Tani waxay ka dhigan tahay in isaga (iyo annaga carruurtiisa) laga soocay Isha Nolosha. Tani waa sababta aan u dhimanno oo aan maalin dhiman doono. Ciise Masiix wuxuu u yimid inuu noo soo celiyo Noloshaan si magacyadeenu u galaan Kitaabka Nolosha. Sida uu ku qoray
Sida uu Nebi Ibraahim u sii arkay hadiyaddan nolosha, iyo sababta uu Ciise noo siin karo nolosha ayaa si faahfaahsan loogu sharraxay halkan. Suuradda Qaf ayaa taas nooga digaysa
Markaasaa lugu dhihi ku tuura Naarta Jahannamo Gaalnimo badane madax adag dhammaantiis.
Suuradda Qaaf 50: 24
Haddaba haddii ay jirto Nolol Waarta oo la soo bandhigay maxaa loogu wargalin waayay?
Tags:kitaabka noloshamaalinta qiyaamahamalaa'igta bidixmalaa'igta duubtaymalaa'igta midigtamalaa'igtayada midigtasuurada 50suurada qaaftafsiir qaaf.